अष्टलक्ष्मी शाक्यले क्याम्प फेरिन्, माधव कमरेडको टुट्यो मन ! - News 88 Post
अष्टलक्ष्मी शाक्यले क्याम्प फेरिन्, माधव कमरेडको टुट्यो मन !
August 4, 2021 N88LeaveaComment on अष्टलक्ष्मी शाक्यले क्याम्प फेरिन्, माधव कमरेडको टुट्यो मन !
काठमाडाैं । माधव नेपालले सिन्धुलीका नेता कार्यकर्ताहरुको माझमा तीन दिन अघि एमाले एकता सजिलो नभएको र जसलाई जहाँ कम्फर्ट हुन्छ त्यही जान सकिने सुनाएका थिए । ती नेताहरुसँग खुलेर बोलेका नेपालले भीम रावल पनि साथमा नरहने संकेत गरेका थिए । त्यतिबेला भनेका पनि थिए, ‘गणेशजी जानुभयो त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन्, जसलाई जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही जाने हो ।’
नेपालको बुझाइमा भीम रावलले साथ नदिने देखिन्छ । अहिले नेपालनिकट दोस्रो तहका नेताहरु मौन देखिन्छन् । केही दिनअघिसम्म एकता भईहाल्छ आजभोलि नै हुन्छ भनेका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टसहितका नेता अहिले बोल्न छाडेका छन् ।
तेस्रो तहका नेताहरु मेटमणि चौधरी, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री चाहिं एमाले फोड्नै पर्ने अभियानमा बढ्ता सक्रिय देखिएका छन् र पार्टी विभाजनको पक्षमा लागिरहेका छन् । चौधरी, झाँक्री र खतिवडाहरु ओली विनाको एमाले बनाउनुपर्ने पक्षमा सक्रिय छन् । उनीहरु वास्तवमा किन यति धेरै चर्को भएर लागेका होलान् ?
खासमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु नै नेपालका लागि भरलाग्दो नभएपछि नेपाल तेस्रो पुस्ता फकाउन लागेका छन् । त्यही क्रममा दायाँबायाँमा झाँक्री, विजय पौडेल, मेटमणि चौधरी, विरोध खतिवडालाई राख्न थालेका छन् । खासै जनधार नभएका विजय पौडेललाई नेपालले गठबन्धनको बैठकमा प्रतिनिधिको रुपमा पठाउन थालेका छन् । गठबन्धन दलहरुको बैठकमा अहिलेसम्म पौडेल दुईपटक सहभागी भइसकेका छन् ।
कमरेड अष्टको मन फेरियो ?
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीस“ग सबैभन्दा बढी आक्रोश पोख्ने र सार्वजनिकरुपमै चर्को आलोचकका बन्दै आएकी नेतृ हुन अष्टलक्ष्मी शाक्य । २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचन अघि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा शाक्यलाई प्रदेशमा उठाइएको थियो । र, त्यसको बचन अध्यक्ष केपी ओलीले पनि दिएका थिए । त्यसैअनुसार तयारीमा पनि गरेकी थिइन ।
त्यही आश्वासन र तयारीसहित प्रदेशमा उम्मेदवार उठाउने सहमति भयो । नेतृ शाक्यको रोजाइमा अरुण नेपाल र पशुपति चौलागाईलाई प्रदेशमा उठाईयो, त्यतिबेला शाक्यले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा चाहिने नेताहरु हुन् भनेर उनीहलाई प्रदेशमा टिकट दिलाउन र मनाउन प्रयास गरेकी थिइन् । त्यो कुरा चौलागाई आफैले पनि केही नेताहरुसँग बताएका थिए । अनि, काठमाडौंमा ओलीको रोजाइका नेताहरुलाई बढ्ता टिकट दिन शाक्य राजी भइन् ।
निर्वाचन सकिएलगत्तै शाक्यको निवासमा पुगेर डोरमणि पौडेलले आफूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मेयर हुँदाको अनुभवका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चलाउने बताएका थिए ।
त्यसको जवाफमा शाक्यले सल्लाह गरौंला भनेकी थिइन् । तर, जब शाक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रयास भयो, त्यतिबेला परिस्थिति फेरियो । अनि, राष्ट्रपति भण्डारीबाट शाक्यको सट्टामा डोरमणि पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने तय भयो ।
त्यसमा अध्यक्ष ओलीको पनि केही सीप चलेन । त्यही बेला राजेन्द्र पाण्डे एउटै समूह भएपनि अन्तिममा शाक्यविरुद्ध उभिए । अनि पौडेल मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । त्यही दिनदेखि शाक्यले भण्डारी र ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएकी थिइन् । नेकपा कालमा पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, भीम रावलभन्दा चर्को विरोध शाक्यले गर्थिन् ।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । एक महिनायता शाक्य मौनजस्तै छिन् । मिडियामा आइरहने शाक्य अहिले चुपचाप छिन् । मिडियालाई कुनै प्रतिक्रिया पनि दिइरहेकी छैनन् । नेपाल समूहभित्र पनि सुरेन्द्र पाण्डे लाइनमा रहेकी शाक्य खासमा झलनाथ खनाल समूहमा पर्छिन् । त्यसैले हुनसक्छ, खनाल उपचारका लागि दिल्ली पुगेपछि शाक्य पनि मौन छिन् । त्यही मौनताको बिचमा प्रदेश सरकारको बजेट पारित गर्न सहयोग गरिन् ।
मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइयो । र, पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने तर्क गर्न थालिन् । यो रणनीतिक हो या ओलीसँग निकटता बढेको हो भन्ने चाहिं प्रष्ट भएको छैन् तर, पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष ओलीसँ संवाद बढेको एमाले स्रोत बताउछ । साउन १४ गते विहीवारमात्रै ओली र शाक्यबीच २ घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको छ ।
बालकोट पुगेर शाक्यले एकताकै पक्षमा कुरा राखेकी थिइन् । र, २०७८ साउन १५ भित्र सरकार फेरिएको अनुभूति गराउन डोरमणि पौडेललाई समयसीमा दिएकी थिइन् । तर, पौडेलले चुपचाप बसे र नेपाल पक्षका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेका पनि छैनन् ।
केही महिनादेखि मुख्यमन्त्रीका लागि तयारी गर्न ओलीले शाक्यलाई आश्वासन दिएका छन् । त्यही आश्वासन पछि नेपाल पक्ष पौडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभएको पनि बताइएको छ । नत्र, मन्त्रालयको संख्या बढाएर भएपनि नेपाल पक्षलाई समेट्न तयार भएको पौडेलले बताइरहेका थिए ।
(साँघु साप्ताहिक, २०७८ साउन १८ गते)
ओलीको मतियार बनेको भन्दै यी सांसद माधव पक्षबाट निष्काशित !
एन आई सी एशिया बैङ्कले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग्यो, अनुभव नहुनेलाई पनि अवसर
ट्वीटरतिर गनगनाउँदै रामकुमारी झाँक्री, भन्छिन् ‘विद्रोहको सधैं वैद्यता हुन्छ !’
बाग्लुङ होली मेलामा दुईजना भीरबाट फाल्ने यी नै हुन्
चितवनमा एमालेको भिडमा पसेका राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हराएपछि…
November 26, 2021 N88